Abasiki bebunda – iAfrika
Sikhule emakhaya kufulelwa ngotshani obahlukahlukene futhi obunamagama ahlukahlukene. Kukhona utshani okuqalwa ngabo ngaphansi uma kufulelwa, obuqinile. Bese kuba khona-ke lobo tshani okugcinwa ngabo ngaphezulu.
Umbuzo umile-ke othi: Yini ibunda? Ibunda phela wuhlobo lotshani bokufulela, omame bayabusika lobu tshani ukuze kufezwe umsebenzi lowo walo ibunda. Lowo msebenzi kungaba ukufulela noma okunye. Kudala izwe lisabusa, abantu besimame kwakungelula ukuthi ubafice behlezi ndawonye, babetholakala emasimini noma besika ibunda, noma-ke betheza ehlathini izinkuni okwakuba yilapho ababekwazi khona ukuxoxa kahle izindaba bebe benza lowo msebenzi abawenzayo.
Ngobani abasiki bebunda?
Uma-ke kuthiwa indaba uzoyithola kubasiki bebunda, lokho kusuke kusho ukuthi leyo ndaba uzoyithola kwabayaziyo. Labo abayaziyo indaba kungaba wukuthi bangabantu abazibonele ngamehlo isenzakalo esithile senzeka noma ngabantu abezwe ngosizwile ngesehlo thizeni esenzekile endaweni. Phela akekho ongazi ukuthi isikhathi esiningi isimame yisona esiba ngovovo liyakhipha ngasezindabeni ezenzakalayo, yingakho nje sekukhona nesisho esithi “ukhuluma ngathi umlobokazi” okusho khona ukuthi ukhulumisa okukamakoti oganile.
Tags Abasiki bebunda, Ibunda, Ukufulela, Utshani
4 thoughts on “Abasiki bebunda”
Sphamandla KaNomavandla Zungu
Sicebile futhi sijulile isiZulu
ngiyabonga bengingazi ngalenkulumo ukuthi ichazani ohheee umuntu ufunda aze afe
Siyabonga umuntu uyafunda nsukuzonke